My World: Blog Day မှာ
ဘလောဂ့်တွေက သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ သူ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာချည်းပါပဲ။ အချိန်အားရှိရင်ရှိသလိုက်ဘလောဂ့်လေးတွေ နိုင်သလောက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်လည်းကြိုက်၊ အလှအပလည်း မိန်းကလေးဆိုတော့ကြိုက်တာပေါ၊့ လက်သည်းလှလှလေးတွေဆိုးထားတာတွေ့လည်းကြိုက်၊ (Rose ထင်တယ်)။ ဗဟုသုတလည်းကြိုက်၊ သတင်းလည်းကြိုက်၊ သီချင်းလည်းကြိုက်(ပေါက် - သီချင်းတွေပဲတင်လို့ မမKom မလာလည်း တို့တော့လာတယ်နော် ;) မချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)လည်း ဘလောဂ့်စာဖတ်သူတွေအတွက်အမြဲစဉ်းစားပေးတတ်တယ်။ ဗဟုသုတကြွယ်လိုက်တာ။ စိတ်ရှည်တယ်။ ဟင်းချက်လည်းကောင်းတယ်။ စာရေးလည်းနူးနူးညံ့ညံ့လေး။ ကြိုက်တယ်။ မမKom လည်းကြိုက်တယ်။ ရေးပုံတွေးပုံသဘောကျတယ်။ ဟာသဥာဏ်လည်းရှိတယ်။ ပေါက် ကလည်း ဘလောဂ့်တွေစလည်ဖြစ်ကတည်းက သိခဲ့ကြတာ။ ကျွန်တော် ကျွန်တော်လို့ပြောတတ်တော့ ယောက်ျားလေးမှတ်လို့ ကိုပေါက်လို့ သွားခေါ်နေတာ၊ တကယ်က ခခလေးရဲ့မေမေဖြစ်နေပါရောလား။ မသီတာလည်း သားတွေကိုလက်တည့်စမ်းပြီး မော်ဒယ်လုပ်ခိုင်းတာ။ မသီတာချုပ်ထားတဲ့စကပ်လေးလားပဲ ၀တ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေး ခုထိ မျက်စိထဲမြင်တယ်၊ သားအငယ်လေးလား အကြီးလေးလားတော့မသိတော့ပါဘူး။ မသီတာရော ကိုဧရာရော စာရေးကောင်းတယ်။ မြတ်မွန်လေးဆိုလည်း တော်တော် စာရေးကောင်းတာ။ အနော်လေး(ကြည်ဖြူပိုင်)ကလည်း စာရေးလည်းကောင်း သီချင်းဆိုလည်းကောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ပညာရှင်ဘ၀မှာပဲပျော်နေပြီ။ ရီတာ့ဆီလည်း စာသွားဖတ်ဖြစ်တာပဲ။ သူရေးပုံက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မိုးပန်းချီက ချောချောလေး။ ဓါတ်ပုံတွေ့ပြီးသား။ ဘရာသာအလင်းစက်များ ဆီလည်းခဏခဏရောက်တယ်။ cbox မှာနောက်လို့ကောင်းသား။ အခုမျက်စိစပ်နေတယ်ဆိုလား၊ ကိုအေအေတီအိုလည်း ဘာလီကျွန်းမှာ ဇနီးချောလေးနဲ့ ကလေးတွေ၊ ငှက်တွေနဲ့ ပျော်နေတာ။ သူ့ဆီလည်း ရောက်ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)နဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေအကြောင်းပြောရတာလည်းပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ ကိုကြီးကျောက်ဘလောဂ့်ကိုလည်းရောက်တယ်။ သူရေးတဲ့စာတွေကလည်း အစအဆုံးမပျင်းအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်သတိတရရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်တွေတပ်ရရင် ဘယ်လောက်သေချာရေးရေးကျန်ကုန်တော့မှာ၊ မကျုန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ ရောက်ဖြစ်တဲ့ဘလောဂ့်လေးတွေ -
ဘလောဂ့်ဂါ ရန်အောင် ၊ ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ၊ သက်တန့်ချို..... ၊ သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ ၊ အန်တီတင့်၏ အမှတ်တရလေးများ၊ မချစ်ကြည်အေး ၊ Rose of Sharon ၊ မိုးစက်ပွင့် ၊ Nine Nine SaNay ၊ ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့) ၊ TTSweet ၊ နေဇော်လင်း ၊ Meine Welt ၊ လူသားအားလုံးအတွက် မယ်ကိုး ၊ Htoo Tay Zar ၊ Shinlay ၊ သဒ္ဓါလှိုင်း ၊ စုံစီနဖာ page မေသိမ့်သိမ့် ကျော် ၊ ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ ၊ KiKi-Idiotlove ၊ မြစ်ကျိုးအင်း ၊ သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ် ၊ နတ်ဆိုးလေး ၊ ရသာချို ၊ သတိုး မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း ၊ ATK's Explicit Blog ၊ မောင်ဘကြိုင် ၊ Wutyee Food House ၊ Chaw Ei Thein ၊ ရွှေပြည်သူ ၊ မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko ၊ အလင်းသစ်၏နေ့စွဲများ ၊ Baby Taster ၊ ကိုဇော် ၊ Thu Hnin See ၊ ပန်ဒိုရာ ၊ နတ်သမီးချော ၊ Sosegado တည်ငြိမ်အေး ၊ Yan Aung ၊ စန္ဒကူး ၊ Jasmine(Taunggyi) ၊ AngelHlaing ၊ အိမ့်ချမ်းမြေ့(မလေး) ၊ မိုးငွေ့နှင့်အတူ ၊ နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း ၊ မမြသွေးနီ ၊ Nge Naing ၊ Burmese taste - Iora ၊ သက်ဝေ ၊ မျောလွင့်တိမ်တို့နားခိုရာ ၊ Speak from my heart ၊ နေ၀သန်ရဲ့အိုအေစစ် ၊ Mr MRT ၊ Ko AATO ၊ နန်းရှင် ၊ မမသီရိ ၊ အဖြူရောင်လမ်းကလေး ၊ Tun Tun Photography ၊ Degolar ၊ ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ခုံ(မောင်မျိုး) ၊ မဒမ်ကိုး ၊ Thet Nandar Family ၊ My Kitchen my life ၊ SoeMya Nandar ThetLwin ၊ WE SHE ME ၊ ကလူသစ် ၊ Steve Evergreen ၊ MaNorHary ၊ Jittoo(Monywa) ၊ မလသာည ၊ မရွှေစင်ဦး ၊ ကောင်းမွန်ဝင်း ၊ မိုးစက်မှော် ၊ Mon Petit Avatar ၊ ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) ၊ အောင်(info) ၊ ဦးဟန်ကြည် အချိန်အားရှိရင် လည်ဖြစ်တဲ့ ဘလောဂ့်လေးတွေပါ။ ဒါတောင် လည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းထဲမပါလိုက်တာရှိဦးမှာ၊ စိတ်မဆိုးကြေးနော်။
(စာသွားသွားဖတ်ပြီး စာရင်းထဲကျန်နေတာလေးတွေရှိလို့ ဒီမှာပဲ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်)
ဘလောဂ့် list ထဲမှာ ထပ်ဖြည့်ရမယ့်လိပ်စာလေးတွေလည်း တစ်ရက်အချိန်ယူပြီး သေသေချာချာပြန်ဖြည့်ပါဦးမယ်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)က နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တာလည်းမျှဝေစေချင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါတွေက တော်တော်များများသိနေကြပြီးပါပြီ။ ဘလောဂ့်ဂါအသစ်လေးတွေ ဒီပိုစ့်ကိုလာဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ သိချင်တာရှိရင် ကိုယ်လည်းသိတယ်ဆိုရင်ပြောပြဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။ cbox မှာ message ချန်ထားပြီးမေးလည်းရပါတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀လေးတွေပိုင်ဆိုင်ပြီး မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ။
ဖြိုးရေ ကာတွန်းလေးတွေဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ
ဘလော်ဂါဆိုတာ ဒါပါလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်
ရယ်ရယ်မောမော ကာတွန်းလေးတွေကြည့်ပြီး ရွှင်လန်းသွားရပါတယ်။ ကျေးဇူး
ညီမ ဖြိုးဖြိုး ရေ
ကာတွန်းလေး တွေ ကပျော်ရွှင်စေတယ်... ညီမ ရေးတဲ့ စာလေးတွေ ကလည်း တွေးစရာလေး တွေ နဲ့ ဖတ်ချင်စရာလေးတွေပါ... ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ချီတက်ကြမယ်နော်
ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရလေး ဖတ်သွားပြီ ဖြိုးဖြိုးရေ။ နွေးထွေးချစ်ခင် ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ ဘလော့ဂ်လောကထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သုတ ရသ နည်းပညာနဲ့ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာတို့ကို ဒီထက်မက ရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်ပါစေနော်။
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေးက ကာတွန်းလေးနဲ့ပါဆိုတော့ ရယ်မောစရာလေးတွေပါဖြစ်သွားရတာပေ့ါ။ ဘလော့လေးထဲမှာ အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အထိ စာပေတွေကို မျှဝေပေးနိုင်ပါစေနော်။
မဖြိုး ကတော့ မအားလို့ သာပဲနော်.. အခုတောင် ကာတွန်းပုံလေး တွေနဲ့ ရောက်သမျှခင်သမျှ ဘလောက်လင့် တွေထည့် နိုင်သေးတယ်။ :) ချီးကျူးအားပေး ပါတယ်ဗျား။
ဘာလီမှာ မိသားစုနဲ့ နေရတော့ ပျော်ပါတယ်။ လာလည် ဖို့လဲ ဖိတ်ပါတယ်ဗျား။
ကာတွန်းတွေ ဖတ်ပြီး ပြုံးသဗျာ... ကိုအေအေတူ ပြောသလို မအားလို့သာ တော်တော့တယ်.. လင့်ခ်တွေ ချိတ်ထားလိုက်ပုံများ ကိုယ်သာဆို မလွယ်..
အမှတ်တရ ပို့စ်လေး ရေးထားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ... (သများတွေ ဘယ်လိုရေးလဲ လိုက်ကြည့်နေတာ)
ကာတွန်းလေးတွေကို သဘောကျလိုက်တာ ။ ဖတ်ဖြစ်တဲ့blog ထဲမှာ ပါဝင်နေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မလည်း စာ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း သတင်းဆောင်းပါးတွေနဲ့ ကြုံနေလို့ comment မရေးတတ်လို့ မချန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကာတွန်းပုံလေးတွေနဲ့ အခုလို ပျော်ပျော်ပါးပါး တက်ဂ်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးကမ္ဘာ မဖြိုးဖြိုးလှိုင် ....:D
ဘလော့ဂါတွေအတွက် ကာတွန်းကလည်း ထိထိမိမိနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိလှပါ၏ ။ :)
မဖြိုးတင်တဲ့ ကာတွန်းလေးတွေဖတ်ပြီး ပြုံးသွားပါကြောင်း။ ဒီပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ ဘလော့တွေကို ၀င်ဖတ်တယ်လို့သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ ဘလော့ဂင်း ကာတွန်းလေးတွေပါလား...ရှာရှာဖွေဖွေ...
ဒီနှစ်ဘလော့ဂ်ဒေးက ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘလော့ရွာတစ်ရွာလုံး အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်နဲ့ အတူတကွ ပို့စ်တွေ တင်ဖြစ်တာ လိုက်ဖတ်ရင်း ကြည်နူးလို့ကို မဆုံးနိုင်တော့ဘူး...
လည်လည်လာသွားပါတယ်။ ကာတွန်းလေးတွေဖတ်ပြီး ကိုယ်တွေနဲ့တူလို့ ရယ်နေရတယ်။
ဟုပ် ရယ်သွားတယ်။ :D
ခုမှ ပြန်လာလည်နိုင်လို့Sorry ပါ။
:) လူလည်ကျပြီး ပို့စ်အဟောင်းလေးကို Recycle ပြန်လုပ်ပေမယ့်လည်း ဘလော့ဂါတွေရဲ့ နှလုံးသား ခဏခဏ မလှုပ်ခါရက်လေတော့ ခေါင်းလေးတညိတ်ညိတ်လုပ်ပြီး ပြုံးပြုံးလေးပဲ ပြန်သွားလိုက်တယ်....
အဲဒီ့အကြောင်းကို ဘလော့ဂ်ရေးရဦးမယ်. အဟတ်ဟတ်.
Tks, Sis... Keep it up...
မဖြိုးဖြိုးရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို ခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်ရယ်
လူလည်ကျပေမယ့် ကိုယ် မဖတ်ရသေးတော့လည်း အသစ်ပေါ့လေ နော့ :D :D
၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလောက်ထဲက ဘလော့ဂ်ရေးတာကို ရပ်ပစ်ခဲ့တော့ မမဖြိုး ၂၀၁၁မှာရေးခဲ့တဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို မသိဖြစ် မဖတ်ခဲ့ဖြစ်လိုက်ဘူး။ သတိတရ ရှိနေပေးတဲ့အတွက် ပိုလည်း ချစ်မိပါတယ်။ မမဖြိုးရဲ့ စာလေးတွေက အမြဲလွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းနေလိုက်တာ လူအတိုင်းလေးပဲ။
နူးညံ့တဲ့အားပေးစကားလေးတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ မိသားစုဘ၀ကို အမြဲတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ မမဖြိုးလေးလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ...အောင်မြင်ပါစေ...ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေ.....တအူတုံဆင်းညီအမလိုပဲ အမြဲချစ်ခင်လေးစားနေမှာပါ။
အချစ်တွေ အကြီးကြီး အများကြီးနဲ့ ချစ်တဲ့သူ :)
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေးက ကာတွန်းလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာလေး။
၂၀၁၁ က အဲဒီအချိန် အင်တာနက် မရှိ ဇုံ ထဲ ရောက်နေလို့ မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဖူး။ အခုမှပဲ ပေါင်းဖတ်ရတော့တယ်။
ဖြိုးရဲ့ စာရင်းထဲ ကိုယ်ပါတာ တွေ့လို့လည်း ပျော်ရပါကြောင်း။
အခုလို ဘလော့ဂ်ဒေးကစပြီး အခုထက် စာတွေ ရေးနိုင်ပါစေ။ စာအုပ်တွေလည်း ထုတ်နိုင်ပါစေလို့..
ံHappy Blog Day ပါ မဖြိုးရယ်း)
မဖြိုးတို့မိသားစုလေးရဲ့ sharing တွေကိုအမြဲတမ်းအားကျနှစ်သက်လျက်ပါနော် ။
Blog Day အမှတ်တရပါပဲ ... Post လေး ဖတ်သွားပါတယ် ... Blogger တွေ ရဲ့ Comment တွေ အပါအ၀င်ပေါ့ ...
ဆားပြန်ချက်တဲ့ ဖြိုးကို အပြစ်မမြင်ရက်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရှင်မကိုးနော..။ အစ်မကတော့ ဒုတိယံမ္ပိ ကွန်မန့်ရေးသွားချင်တယ်။ ကာတွန်းလေးတွေက ထိမိတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပြန်ဖတ်တော့အသစ်အတိုင်းပဲ။ စာတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ရေးပါနော်။